मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिझप्रमले तोकेको देवी-लालहरूको हैसियत
ओलीगमनविरुद्ध ‘झप्रम’हरुले विरोध आन्दोलन चलाएको सबैलाई थाहा छ । जनता आकर्षित गर्न झप्रमहरुले अनेक नौटङ्की चलाउने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । तर यिनले सोचेजस्तो जनता शायद अझै आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
कन्टिर–बाबू यसको कारण खोतल्न चाहन्छन् र प्रश्न गर्छन्– किन यसो भएको होला ? ओलीगमन भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि आन्दोलनले किन गति लिन सकेन ? कन्टिर–बाबू स्वयं यो प्रश्नको उत्तर मनमनै खेलाउँछन्– काङ्ग्रेसको नीति स्पष्ट हुन नसकिरहेको वर्तमानको यो आन्दोलन लोकतन्त्रका लागि हो भनेर मानिसले पत्याउनै सक्या छैनन् ।
अर्को, नेपाली जनताले यी झप्रमलालहरुलाई नचिनेका हुन् र ? यिनी पनि माइतीघर–अनामनगरको बाटो हुँदै सिंहदरबार पुगेकै हुन् नि ! कन्टिर–बाबू आक्रोशित हुँदै सोध्छन्– यिनले चाहिँ हिजो के उखाडे यार ? जनताको पक्षमा यिनले केही उखाड्न सकेको भए मधेसका जिल्लाबाट ‘…देवी’ र ‘…लाल’हरूलाई रातिमे चल्नेवाला नैट बसमा कोचेर राजधानी लेआउनुपर्ने मरजन्सी त हुने थिएन ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– रामोेराम, पशुपति बाबाको कस्सम, हिजो साँझ काठमाडौँको गौशालादेखि कोटेश्वरसम्म यी देवी र लालहरूको हालत देखेर बहुत दुःख लाग्यो । बहुत चिन्ता लाग्यो ।
कन्टिर–बाबूको प्रश्न छ– ए झप्रम तिमीले हिजो आफ्नोभन्दा अरूका लागि के उखाड्यौ ? ती देवी र लालको हैसियत त तिमीहरूले जानाजान आज पनि हिजोको जस्रै राखेका हौ नि ! कि कोई शक ?
झप्रमलाललाई कन्टिर–बाबूको सल्लाह छ– पहिला तिमीहरू आफूप्रति जनतालाई विश्वस्त बनाऊ, आन्दोलन लोकतन्त्र र सङ्घीयताको पक्षमा हो भन्ने विश्वास दिलाऊ जनता आफैँ आउँछन् । नैट बसको फोक्सिङ गर्नै पर्दैन ।